အလားအလာများကို အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့် ဖော်ပြခြင်း (Describing Trends in English) - Myanmar Network
အလားအလာများကို အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့် ဖော်ပြခြင်း (Describing Trends in English)
Posted by Soe Soe Win on April 23, 2013 at 16:20 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
စီးပွားရေးအကြောင်း အင်္ဂလိပ်လိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာ ကုန်သွယ်ရေး (business) နှင့် စီးပွားရေး (economy)၊ အလားအလားများ (trends) တို့အကြောင်းလည်းပါလာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအလားအလာတွေ အကြောင်း ပြောတဲ့အခါမှာ ဒီဆောင်းပါးထဲမှာတော့ အသုံးဝင်ပြီး အသုံးများတဲ့ အသုံးအနှုန်းတို့ကို ဖော်ပြရတတ်ပါတယ်။
To forecast (ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည်။)
We forecast that costs could rise byafurther 50% between now and next year. (အခုအချိန်နဲ့ နောက်နှစ် ကြားမှာ ကုန်ကျစရိတ်တွေဟာ နောက်ထပ် ၅၀% နှုန်းမြင့်တက်သွားနိုင်တယ်လို့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းပါတယ်။)
To predict (ဟောကိန်းထုတ်သည်။)
Economists are predictingadouble-dip recession.( စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းဟာ နှစ်ဆကျဆင်းလိမ့်မယ်လို့ ဟောကိန်းထုတ်နေကြပါတယ်။)
To go up (တက်လာသည်။)
Prices have gone up by 10% (ဈေးနှုန်းတွေဟာ ၁၀% တက်သွားပါတယ်။)
To increase (မြင့်တက်လာသည်)
The cost of living is increasing. (လူနေမှုစရိတ်ဟာ မြင့်မားလာပြီ။)
To rise (မြင့်တက်သည်)
Prices are rising again. (ဈေးနှုန်းတွေဟာ ထပ်ပြီးတက်နေပြန်ပြီ။)
To strengthen (အားကောင်းလာသည်။)
The pound has strengthened against the dollar. (ဒေါ်လာပေါက်ဈေးနှင့်စာလျှင် စတာလင်ပေါင်တန်ဘိုးက ပိုအားကောင်းလာတယ်။)
To recover (နာလန်ထူ/ပြန်မတ်လာသည်။)
The Euro has recovered after last week's heavy trading. (ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ကုန်သွယ်မှုပိုများလာတဲ့ အတွက် ယူရိုနဲ့တန်ဖိုးဟာ ပြန်မတ်လာပါပြီ။)
To boost (မြင့်တင်သည်)
The weaker pound should also boost exports. (အားပျော့နေတဲ့ စတာလင်ပေါင်က ပို့ကုန်တွေကို မြင့်တင်ပေးလောက်ပါတယ်။)
To peak at (အမြှင့်ဆုံးရောက်သည်။)
Shares peaked at 679p then fell. (အစုရှယ်ယာတွေဟာ 679ပဲနိမှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားပြီးနောက် ပြန်ကျသွားတယ်။)
To rocket (ထိုးတက်သွားသည်)
The cost of bringing upachild has rocketed by overathird in the past five years. (ပြီးခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်အတွင်း မှာ ခလေးတစ်ယောက်ကို လူလားမြောက်အောင် ကျွေးမွေးပျိုးထောင်ရတဲ့ စရိတ်ဟာ သုံးပုံတစ်ပုံမက ထိုးတက်သွားတယ်။)
To soar (တဟုန်ထိုး မြင့်တက်သည်။)
Soaring house prices make it difficult for first-time buyers to buyahouse. (တဟုန်ထိုးမြင့် တက်နေတဲ့ အိမ်ဈေးနှုန်းတွေကြောင့် ပထမဦးဆုံး အိမ်ဝယ်မဲ့သူများဟာ အခက်တွေ့နေကြ ပါတယ်။)
To surge (တရှိန်ထိုးတက်သည်။)
Costs have surged asaresult of increasing oil prices. (ဆီဈေးနှုန်းမြင့်မားမှုကြောင့် ကုန်ကျ စရိတ်တွေဟာ တစ်ရှိန်ထိုးတက်လာပါတယ်။)
To go down (ကျဆင်းသည်)
Prices have gone down by 10% (ဈေးနှုန်းတွေဟာ ၁၀% ကျဆင်းသွားပါတယ်။)
To decrease (ကျဆင်းသည်။)
The cost of living is decreasing. (လူနေမှုစရိတ်က ကျဆင်းလာပါပြီ။)
To Fall (ကျဆင်းသည်)
Prices are falling again. (ဈေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းနေပြန်ပြီ။)
To weaken (အားပျော့သည်။)
The pound has weakened against the Euro (ယူရိုပေါက်ဈေးနဲ့စာရင် စတာလင်ပေါင်ရဲ့ တန်ဘိုးကအားပျော့သွားတယ်။)
To drop (ကျဆင်းသည်/လျော့နည်းသည်။)
Increased labour costs have caused profits to drop. (မြင့်တက်လာတဲ့ အလုပ်သမား ခတွေကြောင့် အမြတ်လျော့နည်းသွားတယ်။)
To slow (အေးသွားသည်/နှေးသွားသည်)
The economy slowed last year asaresult of interest rate rises. (အတိုးနှုန်းမြင့်တက်မှု ကြောင့် စီးပွားရေးအေးသွားတယ်။)
To bottom out at (lowest point) (အနိမ့်ကျဆုံးထိုးကျသည်။)
Shares bottom out at 37P then rose. (အစုရှယ်ယာတွေဟာ 37 ပဲနိမှာ အနိမ့်ကျဆုံးအထိ ထိုးကျ သွားပြီးမှ ပြန်မြင့်တက်လာတယ်။)
To plummet (dramatic fall) (တဟုန်ထိုးကျဆင်းသွားသည်။)
The Euro plummeted against the US Dollar then rose. (ယူရိုငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာ ယူအက်(စ်)ဒေါ် လာပေါက်ဈေးနဲ့ယှဉ်ရင် တဟုန်ထိုးကျဆင်းသွားပြီးမှ ပြန်မြင့်တက်လာခဲ့တယ်။)
To stagnate (Staying atalow point, and not moving at all) (တန့်နေသည်/ငြိမ်နေသည်။)
The economy is stagnating. (စီးပွားရေးဟာ ကျပြီးတန့်နေတယ်။)
To level out (become stable) (တည်ငြိမ်နေတယ်)။
Share prices have leveled out this month at 497p (အစုရှယ်ယာဈေးနှုန်းတွေဟာ ဒီလမှာ 497 ပဲနိမှာ တည်ငြိမ်နေတယ်။
To remain stable (တည်ငြိမ်နေသည်။)
The cost of petrol has remained stable. (ဆီဈေးနှုန်းက တည်ငြိမ်နေတယ်။)
အပြောင်းအလဲများအကြောင်း အင်္ဂလိပ်လိုပြောခြင်း (Ways of talking about movement in English)~
Steady =asteady rise (ပုံမှန်မြင့်တက်မှု)
Slight (အနည်းငယ်) =aslight improvement (အနည်းငယ် တိုးတက်မှု)
Moderate (အသင့်အတင့်) =amoderate recovery (သင့်တင့်သော နာလန်ထူမှု)
Dramatic (သိသာထင်ရှားသော) =adramatic rise (သိသာထင်ရှားလွန်းတဲ့ မြင့်တက်မှု)
Substantial (တောင့်တင်းခိုင်မာသော) = Substantial growth (တောင့်တင်းခိုင်မာသော ကြီးပွားတိုးတက်မှု)
Robust (အားပါးတရရှိသော) = robust growth (အားပါးတရရှိသော ကြီးပွားတိုးတက်မှု)
Upward/downward (အမြင့်ဘက်/အကျဘက်) = An upward/downward trend (အမြင့်ဘက်/ အကျဘက်အလားအလာ)
အသုံးဝင်သောနာမ်များ (Useful nouns)
Financial turbulence = ငွေရေးကြေးရေးရှုပ်ထွေးမှု
Financial turbulence on the stock market has weakened the dollar. (စတော့နဲ့ ရှယ်ယာဒိုင်မှာ ငွေကြေးအရှုပ်အထွေးကြောင့်ဒေါ်လာရဲ့တန်ဖိုးကအားပျော့သွားပါတယ်။)
Slow down = ကျဆင်းမှု
The recent slowdown in the economy threatens jobs. (မကြာခင်က စီးပွားရေးကျဆင်းမှုက အလုပ်အကိုင်တွေကို ဒုက္ခပေးနေပါတယ်။)
အလားအလာမြားကို အင်ျဂလိပျစကားဖွငျ့ ဖျောပွခွငျး (Describing Trends in English)
စီးပှားရေးအကွောငျး အင်ျဂလိပျလိုဆှေးနှေးကွတဲ့အခါမှာ ကုနျသှယျရေး (business) နှငျ့ စီးပှားရေး (economy)၊ အလားအလားမြား (trends) တို့အကွောငျးလညျးပါလာတတျပါတယျ။ အဲဒီအလားအလာတှေ အကွောငျး ပွောတဲ့အခါမှာ ဒီဆောငျးပါးထဲမှာတော့ အသုံးဝငျပွီး အသုံးမြားတဲ့ အသုံးအနှုနျးတို့ကို ဖျောပွရတတျပါတယျ။
To forecast (ကွိုတငျခနျ့မှနျးသညျ။)
We forecast that costs could rise byafurther 50% between now and next year. (အခုအခြိနျနဲ့ နောကျနှဈ ကွားမှာ ကုနျကစြရိတျတှဟော နောကျထပျ ၅၀% နှုနျးမွငျ့တကျသှားနိုငျတယျလို့ ကွိုတငျခနျ့မှနျးပါတယျ။)
To predict (ဟောကိနျးထုတျသညျ။)
Economists are predictingadouble-dip recession.( စီးပှားရေးအကပျြအတညျးဟာ နှဈဆကဆြငျးလိမျ့မယျလို့ ဟောကိနျးထုတျနကွေပါတယျ။)
To go up (တကျလာသညျ။)
Prices have gone up by 10% (ဈေးနှုနျးတှဟော ၁၀% တကျသှားပါတယျ။)
To increase (မွငျ့တကျလာသညျ)
The cost of living is increasing. (လူနမှေုစရိတျဟာ မွငျ့မားလာပွီ။)
To rise (မွငျ့တကျသညျ)
Prices are rising again. (ဈေးနှုနျးတှဟော ထပျပွီးတကျနပွေနျပွီ။)
To strengthen (အားကောငျးလာသညျ။)
The pound has strengthened against the dollar. (ဒျေါလာပေါကျဈေးနှငျ့စာလြှငျ စတာလငျပေါငျတနျဘိုးက ပိုအားကောငျးလာတယျ။)
To recover (နာလနျထူ/ပွနျမတျလာသညျ။)
The Euro has recovered after last week's heavy trading. (ပွီးခဲ့တဲ့ အပတျက ကုနျသှယျမှုပိုမြားလာတဲ့ အတှကျ ယူရိုနဲ့တနျဖိုးဟာ ပွနျမတျလာပါပွီ။)
To boost (မွငျ့တငျသညျ)
The weaker pound should also boost exports. (အားပြော့နတေဲ့ စတာလငျပေါငျက ပို့ကုနျတှကေို မွငျ့တငျပေးလောကျပါတယျ။)
To peak at (အမွှငျ့ဆုံးရောကျသညျ။)
Shares peaked at 679p then fell. (အစုရှယျယာတှဟော 679ပဲနိမှာ အမွငျ့ဆုံးဖွဈသှားပွီးနောကျ ပွနျကသြှားတယျ။)
To rocket (ထိုးတကျသှားသညျ)
The cost of bringing upachild has rocketed by overathird in the past five years. (ပွီးခဲ့တဲ့ ငါးနှဈအတှငျး မှာ ခလေးတဈယောကျကို လူလားမွောကျအောငျ ကြှေးမှေးပြိုးထောငျရတဲ့ စရိတျဟာ သုံးပုံတဈပုံမက ထိုးတကျသှားတယျ။)
To soar (တဟုနျထိုး မွငျ့တကျသညျ။)
Soaring house prices make it difficult for first-time buyers to buyahouse. (တဟုနျထိုးမွငျ့ တကျနတေဲ့ အိမျဈေးနှုနျးတှကွေောငျ့ ပထမဦးဆုံး အိမျဝယျမဲ့သူမြားဟာ အခကျတှနေ့ကွေ ပါတယျ။)
To surge (တရှိနျထိုးတကျသညျ။)
Costs have surged asaresult of increasing oil prices. (ဆီဈေးနှုနျးမွငျ့မားမှုကွောငျ့ ကုနျကြ စရိတျတှဟော တဈရှိနျထိုးတကျလာပါတယျ။)
To go down (ကဆြငျးသညျ)
Prices have gone down by 10% (ဈေးနှုနျးတှဟော ၁၀% ကဆြငျးသှားပါတယျ။)
To decrease (ကဆြငျးသညျ။)
The cost of living is decreasing. (လူနမှေုစရိတျက ကဆြငျးလာပါပွီ။)
To Fall (ကဆြငျးသညျ)
Prices are falling again. (ဈေးနှုနျးတှေ ကဆြငျးနပွေနျပွီ။)
To weaken (အားပြော့သညျ။)
The pound has weakened against the Euro (ယူရိုပေါကျဈေးနဲ့စာရငျ စတာလငျပေါငျရဲ့ တနျဘိုးကအားပြော့သှားတယျ။)
To drop (ကဆြငျးသညျ/လြော့နညျးသညျ။)
Increased labour costs have caused profits to drop. (မွငျ့တကျလာတဲ့ အလုပျသမား ခတှကွေောငျ့ အမွတျလြော့နညျးသှားတယျ။)
To slow (အေးသှားသညျ/နှေးသှားသညျ)
The economy slowed last year asaresult of interest rate rises. (အတိုးနှုနျးမွငျ့တကျမှု ကွောငျ့ စီးပှားရေးအေးသှားတယျ။)
To bottom out at (lowest point) (အနိမျ့ကဆြုံးထိုးကသြညျ။)
Shares bottom out at 37P then rose. (အစုရှယျယာတှဟော 37 ပဲနိမှာ အနိမျ့ကဆြုံးအထိ ထိုးကြ သှားပွီးမှ ပွနျမွငျ့တကျလာတယျ။)
To plummet (dramatic fall) (တဟုနျထိုးကဆြငျးသှားသညျ။)
The Euro plummeted against the US Dollar then rose. (ယူရိုငှရေဲ့တနျဖိုးဟာ ယူအကျ(ဈ)ဒျေါ လာပေါကျဈေးနဲ့ယှဉျရငျ တဟုနျထိုးကဆြငျးသှားပွီးမှ ပွနျမွငျ့တကျလာခဲ့တယျ။)
To stagnate (Staying atalow point, and not moving at all) (တနျ့နသေညျ/ငွိမျနသေညျ။)
The economy is stagnating. (စီးပှားရေးဟာ ကပြွီးတနျ့နတေယျ။)
To level out (become stable) (တညျငွိမျနတေယျ)။
Share prices have leveled out this month at 497p (အစုရှယျယာဈေးနှုနျးတှဟော ဒီလမှာ 497 ပဲနိမှာ တညျငွိမျနတေယျ။
To remain stable (တညျငွိမျနသေညျ။)
The cost of petrol has remained stable. (ဆီဈေးနှုနျးက တညျငွိမျနတေယျ။)
အပွောငျးအလဲမြားအကွောငျး အင်ျဂလိပျလိုပွောခွငျး (Ways of talking about movement in English)~
Steady =asteady rise (ပုံမှနျမွငျ့တကျမှု)
Slight (အနညျးငယျ) =aslight improvement (အနညျးငယျ တိုးတကျမှု)
Moderate (အသငျ့အတငျ့) =amoderate recovery (သငျ့တငျ့သော နာလနျထူမှု)
Dramatic (သိသာထငျရှားသော) =adramatic rise (သိသာထငျရှားလှနျးတဲ့ မွငျ့တကျမှု)
Substantial (တောငျ့တငျးခိုငျမာသော) = Substantial growth (တောငျ့တငျးချိုငျမာသော ကွီးပှားတိုးတကျမှု)
Robust (အားပါးတရရှိသော) = robust growth (အားပါးတရရှိသော ကွီးပှားတိုးတကျမှု)
Upward/downward (အမွငျ့ဘကျ/အကဘြကျ) = An upward/downward trend (အမွငျ့ဘကျ/ အကဘြကျအလားအလာ)
အသုံးဝငျသောနာမျမြား (Useful nouns)
Financial turbulence = ငှရေေးကွေးရေးရှုပျထှေးမှု
Financial turbulence on the stock market has weakened the dollar. (စတော့နဲ့ ရှယျယာဒိုငျမှာ ငှကွေေးအရှုပျအထှေးကွောငျ့ဒျေါလာရဲ့တနျဖိုးကအားပြော့သှားပါတယျ။)
Slow down = ကဆြငျးမှု
The recent slowdown in the economy threatens jobs. (မကွာခငျက စီးပှားရေးကဆြငျးမှုက အလုပျအကိုငျတှကေို ဒုက်ခပေးနပေါတယျ။)
Permalink Reply by ဝါရင် ဘီတီ on April 24, 2013 at 10:02
Permalink Reply by pyaephyo on April 24, 2013 at 10:09
Permalink Reply by Thaw Tar Myint on April 24, 2013 at 10:35
Permalink Reply by Zeyar on April 24, 2013 at 11:02
Permalink Reply by Thaung Zaw on April 24, 2013 at 12:13
oh! so great. Thank you so much.
Permalink Reply by Myo Paing on April 24, 2013 at 12:47
This is very useful when studying for the Q1 of IELTS writing! Thanks!
Permalink Reply by Htun Htun Soe on April 24, 2013 at 13:45
Permalink Reply by sikedeveechan on April 24, 2013 at 23:05
Permalink Reply by Rev Sundara on April 25, 2013 at 10:48
Thanks for learnig your words.
Permalink Reply by SOE THANDAR on May 10, 2013 at 14:38
Permalink Reply by lae lae khaing on April 28, 2014 at 14:12
Permalink Reply by Tin Aung Zaw on October 8, 2014 at 10:55
It is good word that using. Thanks